Nya Yehowa Nyankopɔn Akwankyerɛ So Mfaso Nnɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mingrelian Mongolian Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
GYINAE PA BI A WOSII WƆ POLAND
“BERE a mebɔɔ asu no, na madi mfe 15. Abosome nsia akyi no, mifii ase yɛɛ akwampaefo aboafo adwuma. Meyɛɛ no afe baako, na ɛno akyi no mebɛyɛɛ daa kwampaefo. Miwiee ntoaso sukuu no, mibisaa kwan sɛ mepɛ sɛ mekɔsom wɔ baabi a wohia Ahenni adawurubɔfo pii. Ná me ne me nanabea a ɔnyɛ Yehowa Dansefo na ɛte wɔ yɛn kurom, na na mepɛ sɛ mifi hɔ. Bere a ɔmansin sohwɛfo no kae sɛ menyɛ asɛnka adwuma no wɔ me kurom hɔ ara, baabi a wɔwoo me no, me werɛ howee paa! Ɛwom, mamma wanhu sɛnea na asɛm no ahaw me de, nanso misii me ti ase fii hɔ kosusuw asɛm a ɔkae no ho. Meka kyerɛɛ onuawa a me ne no rekɔ asɛnka no sɛ: ‘Ɛyɛ me sɛ mereyɛ ayɛ m’ade sɛ Yona. Nanso, awiei koraa no, Yona kɔɔ Niniwe. Sɛ ɛte saa a, ɛnde me nso mɛsom wɔ asasesin a wɔde ama me no mu.’
“Masom sɛ ɔkwampaefo mfe nnan wɔ me kurom, na mahu paa sɛ nyansa wom sɛ mitiee akwankyerɛ a ɔmansin sohwɛfo no de maa me no. Mabehu sɛ me ara na na me suban nye. Seesei m’ani gye paa. Bosome baako ntam, mitumi yɛɛ Bible adesua 24. Yehowa adom so, me ne me nanabea a na ɔsɔre tia me no mpo fii ase suaa Bible.”
ANIGYESƐM BI A ESII WƆ FIJI
Ná ɛsɛ sɛ Bible suani bi a ɔwɔ Fiji si gyinae sɛ ɔbɛkɔ Kristofo nhyiam anaasɛ ɔne ne kunu bɛkɔ ne kunu busuani bi awodadi apontow ase. Ne kunu penee so sɛ ɔnkɔ ɔmantam nhyiam no. Bible suani no ka kyerɛɛ ne kunu sɛ, sɛ wɔpɔn nhyiam no a, ɔbɛba apontow no ase. Nanso, bere a ofii ɔmantam nhyiam no ase beduu fie no, osii gyinae sɛ ɛbɛyɛ papa sɛ ɔrenkɔ apontow no ase efisɛ anhwɛ a na wakɔyɛ biribi a ɛbɛma ɔne Onyankopɔn ntam asɛe. Enti wankɔ.
Saa bere no, na ne kunu aka akyerɛ n’abusuafo sɛ, waka akyerɛ ne yere sɛ, sɛ ɔpɔn “Adansefo nhyiam” no a ɔmmra apontow no ase. Nanso, n’abusuafo no kae sɛ, “Wo yere remma da. Yehowa Adansefo nni awoda!” *
Nea efii mu bae ne sɛ, ne kunu no ani gyee gyinae a ne yere no sii no ho. Ɛyɛɛ no dɛ paa sɛ ne yere no anyɛ biribi a ɛbɛsɛe ne gyidi ne n’ahonim. Nokware a odii nti, akyiri yi otumi dii ne kunu ne afoforo adanse. Ekosii sɛn? Ne kunu no penee so sɛ wɔne no nsua Bible, na ofii ase ne ne yere no kɔɔ asafo nhyiam.
^ nky. 7 Hwɛ “Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ” wɔ December 15, 2001, Ɔwɛn-Aban mu.